Vaovao - inona ny famerenan'ny resina IX?
Inona ny famerenan'ny resina IX?
Mandritra ny tsingerin'ny serivisy iray na maromaro dia ho reraka ny resina IX, midika izany fa tsy afaka manamora ny fihetsiky ny fifanakalozana ion intsony izy. Mitranga izany raha toa ny ion-ndray mandoto dia efa saika sahan'ny tranokala mavitrika amin'ny resin matrix. Raha tsorina, ny famerenana amin'ny laoniny dia dingana iray izay hamerenana ireo vondrona miasa anionika na cationika averina amin'ny matrix resin efa lany. Izany dia tanterahina amin'ny alàlan'ny fampiharana ny vahaolana famerenana simika, na dia miankina amin'ny lafin-javatra maromaro aza ny fizotrany sy ny famerenam-bidy.
Karazana fizotran'ny fanavaozana ny resina IX
Ny rafitra IX dia mazàna maka ny tsanganana izay misy karazana resina iray na maromaro. Mandritra ny tsingerin'ny serivisy, ny renirano iray dia mizotra mankany amin'ny tsanganana IX izay misy valiny amin'ny resin. Ny tsingerin'ny famerenana amin'ny laoniny dia mety ho iray amin'ireo karazany roa, miankina amin'ny làlana izay alain'ny vahaolana famerenana. Anisan'izany ireto:
1）Famerenana indray ny fiaraha-mientana (CFR). Ao amin'ny CFR, ny vahaolana famerenana amin'ny laoniny dia manaraka ny làlana mitovy amin'ny vahaolana hitsaboana azy, izay mazàna ambony sy ambany ao amin'ny tsanganana IX. Tsy ampiasaina matetika ny CFR rehefa mitaky fitsaboana lehibe na ilaina ny kalitao avo kokoa, ho an'ny fatana asidra mahery (SAC) sy ny fandriana resa mahery (SBA) matanjaka satria ny vahaolana regenerant be loatra dia takiana mba hamerenana amin'ny laoniny ny resina. Raha tsy misy ny famerenana amin'ny laoniny tanteraka, ny resina dia mety hivoaka amin'ny rano voatondrona amin'ny tsiranoka voatsabo ny resina amin'ny fizotran'ny serivisy manaraka.
2）Famerenana amin'ny laoninyn (RFR). Fantatra amin'ny anarana hoe counterener regeneration, RFR dia miteraka tsindrona ny vahaolana famerenana amin'ny laoniny mifanohitra amin'ny fikorianan'ny serivisy. Mety hidika izany hoe fitomboan'ny famoahana / fidinana ao anaty na fihodinan'ny famerenana / fidinana ambony. Na izany na tsy izany, ny vahaolana famerenana amin'ny laoniny dia mifandray amin'ireo sosona resin tsy reraka aloha, ka mahatonga ny fizotran'ny fiterahana hahomby kokoa. Vokatr'izany, ny RFR dia mitaky vahaolana kely kokoa amin'ny famerenana amin'ny laoniny ary miteraka famoahana rano tsy misy loto, na dia zava-dehibe aza ny manamarika fa ny RFR dia miasa tsara raha toa ka mijanona eo amin'ny toerany mandritra ny fanavaozana hatrany ireo sosona resin. Noho izany, ny RFR dia tsy tokony hampiasaina fotsiny amin'ireo andry IX fandriana feno fonosana, na raha misy karazana fitazomana fitazonana ampiasaina mba hisorohana ny resina tsy hihetsika ao anatin'ny tsanganana.
Dingana tafiditra amin'ny famerenan'ny resina IX
Ireto misy dingana manaraka ao anatin'ny tsingerin'ny fiterahana indray:
Backwash. Ny fanasan-damba dia atao ao amin'ny CFR ihany, ary mitaky fanasana ny resina mba hanesorana ireo valaka mihantona ary hizara vakana vita amin'ny vinavina. Ny fikorontanan'ny vakana dia manampy amin'ny fanesorana ireo sombin-javatra tsara sy fametrahana eo ambonin'ny tampon'ny resina.
Tsindrona regenerant. Ny vahaolana regenerant dia atsofoka ao amin'ny tsanganana IX amin'ny taha-pidina ambany mba hamelana ny fotoana hifandraisana amin'ny resin. Ny fizotran'ny fanavaozana dia sarotra kokoa ho an'ny efitrano fandriana mifangaro izay samy manana resins anion sy cation. Ao amin'ny fandriam-pandriana mifangaro IX, ohatra, ny resins dia misaraka aloha, avy eo ampiharina regenera caustic, arahin'ny regenerant asidra.
Famindran-toerana maharitra. Ny famerenana indray dia alefa tsikelikely amin'ny alàlan'ny fampidirana miadana ny rano fanalefahana, mazàna amin'ny taham-pivoarana mitovy amin'ny vahaolana fanavaozana. Ho an'ny efamira fandriana mifangaro, dia misy ny famindran-toerana aorian'ny fampiharana ny tsirairay amin'ireo vahaolana miverina, ary avy eo ny resina dia afangaro amin'ny rivotra na azota voafintina. Ny taham-pivoakan'ity dingana "kobanina miadana" ity dia tsy maintsy tanterahina tsara mba hisorohana ny fahasimban'ny vakana resin.
Sasao. Farany, ny resina dia hosasana amin'ny rano amin'ny taham-pandehanana mitovy amin'ny tsingerin'ny serivisy. Tokony hitohy ny tsingerina manasa mandra-pahatongan'ny haavon'ny kalitaon'ny rano kendrena.
Inona avy ireo fitaovana ampiasaina amin'ny famerenan'ny resina IX?
Ny karazana resina tsirairay dia mitaky andian-tery famerenana simika mety hiteraka. Eto izahay dia nanoritra vahaolana mahazatra fanavaozana isaky ny karazana resin, ary namintina ireo fomba hafa azo ampiharina.
Ny famerenan'ny asidra mahery (SAC)
Ny resina SAC dia azo asiana asidra matanjaka ihany. Ny sodium klôroida (NaCl) no zava-maniry mahazatra indrindra amin'ny fanalefahana fampiharana, satria mora vidy sy mora azo izany. Potassium chloride (KCl) safidy mahazatra an'ny NaCl rehefa tsy ilaina ny sodium amin'ny vahaolana voatsabo, raha amonium chloride (NH4Cl) kosa matetika no soloina fampiharana malefaka malefaka.
Ny demineralisation dia dingana roa, ny voalohany dia ny fanesorana ireo cations amin'ny fampiasana ny resina SAC. Ny asidra Hydrochloric (HCl) no mpamokatra voajanahary mahomby sy be mpampiasa indrindra amin'ny fampiharana decationization. Ny asidra sulphuric (H2SO4), raha safidy mora vidy kokoa sy tsy atahorana kokoa ho an'ny HCl, dia manana fahaiza-miasa ambany kokoa, ary mety hitarika amin'ny rotsakorana solifate calcium raha ampiharina amin'ny fifantohana avo loatra.
Ny famerenan'ny asidra malemy (WAC)
HCl no mpamonjy voina azo antoka sy mahomby indrindra amin'ny rindranasa fifanarahana. H2SO4 dia azo ampiasaina ho solon'ny HCl, na dia tsy maintsy tazonina amin'ny fifandanjana ambany aza izy io mba hialana amin'ny rotsakorana sulphate calcium. Ny vahaolana hafa dia misy asidra malemy, toy ny asidra acetic (CH3COOH) na asidra citric, izay indraindray koa ampiasaina hamerenana ireo resins WAC.
Mpiorina mahery an'ny Base Anion (SBA)
Ny resina SBA dia azo averina matanjaka amin'ny fototra mafy. Ny soda kaustika (NaOH) dia saika ampiasaina matetika ho mpamorona SBA amin'ny famongorana ny demineralisasiana. Azo ampiasaina ihany koa ny potasy caustic, na dia lafo aza.
Resina malemy Base Anion (WBA)
Ny NaOH dia saika ampiasaina amin'ny famerenana amin'ny laoniny WBA, na dia azo ampiasaina koa ny alkaly malemy kokoa, toy ny Ammonia (NH3), Sodium carbonate (Na2CO3), na ny fampiatoana ny sokay.